Otu esi wepu aha site na ozi emelicited na - Ndụmọdụ Ndị Na-enye Aka Site na Semalt
E nwere ozi dị iche n'etiti ozi ịntanetị nke onye kwesịrị iwepụ aha ya n'ihi na ha anaghịzi arụ ọrụ ọ bụla na nke ndị na-ekwesịghị ịdebanye aha. N'akwụkwọ a, Michael Brown, Semalt Onye ahịa Success Manager, na-atụle ọdịiche dị n'etiti edemede abụọ ahụ na-akpata arụmụka sitere na otu akụkọ mere otu n'ime ndị ọrụ weebụ.
Onye ahịa ahụ kwuru na ị natara ọtụtụ ozi ịntanetị na-achọghị maka nri na nri anụ ụlọ. Ọ dị nnọọ njọ ma na-ewe iwe iji hichapụ 100 ozi ịntanetị ọ bụla oge ha nyochara email ha. Inyefe site na ozi ịntanetị ma wepụta otu onye ọzọ iji kpochapụ bụ ihe siri ike n'ihi na ha amaghị otú o si dị nchebe imeghe ọ bụla - vacation rentals in spain	0.
Ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịchọta nke a mgbagwoju anya, mana ọbụlagodi, onye kwesịrị ịiche ọdịiche dị n'etiti nke email chọrọ ịtọpụ na ndị na-adịghị. Ihiere nke ịdepughị ozi ịntanetị dị mkpa nwere ike ịbịara onye ọ bụla ihe ọjọọ. Ihe na - esonụ bụ nkowa ihe mere, na iwu ndị metụtara.
Akwụpụla aha na Spam
Aha kachasị mma maka nnukwu ego nke ozi ịntanetị a na-achọghị bụ spam. Ozi emelite Spam enweghị otu adreesị ozi-e ha lekwasịrị anya. Kama nke ahụ, ndị na-agba ọsọ na-ezipụ ha gaa na adreesị adreesị na-apụta na ọ dịghị akwụkwọ nkwekọrịta ọ bụla.
Ebe ọ bụ na ọ dịghị ndekọ ọ bụla na-echeta na ịbanye, n'ihi na onye ọ bụla ekwesịghị ichegbu onwe ya maka ịkọwapụta ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na - eche ihe mere enwere ike ịpịpụ bọtịnụ ma ọ bụrụ na enweghi ndebanye aha? Azịza ya dị mfe, ndị na - agba ọsọ na - adịghị mma.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ozi ịntanetị spam na-abanye na adreesị email. Ya mere, oge ntanye na-enweta na bọtịnụ wepu aha, onye hacker natara akwụkwọ na-egosi na ozi email adịghị n'ezie. Ozugbo ha chọpụtara na email ahụ dị ndụ, ha ga-emewanye mgbalị ha na izigakwu spam. Ozugbo ndị ọrụ jiri bọtịnụ wepu aha ha, ha na - ebido ịnweta ohere karịa karịa mgbe ọ bụla, nke bụ ya mere ha ga - eji zere ya na ihe ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, enwere nhọrọ iji tọọ ọkọlọtọ ahụ dị ka spam nke bụ ihe ndị mmadụ kwesịrị ime kama iji ozi dị otú ahụ. Ka o sina dị
Wepu aha na ihe ndị maara nke ọma banyebanye maka
Mgbe mmadụ dị njikere igbochi ịnweta ozi-e site n'aka usoro ozi nzipu ozi, ndị ọkachamara na-ekwu na ọ dị mma iji njikọ ejiri mee ka ị wepu aha. Mmadụ ekwesịghị ịkọcha ya dị ka spam n'ihi na o nwere ike ime ka ndị ọzọ kwenye ya ka ha kwụsị ịnata ụdị nrịbama ndị ahụ.
Iwu iji soro
Iwu iji chọpụta onye email onye kwesịrị ma ọ bụ na ya ekwesịghị ịdebanye aha ya dị nnọọ mfe.
Ọ bụrụ na mmadụ debere ihe dịka akwụkwọ akụkọ, wee họrọ nke ahụ ịnweta ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmekọrịta azụmahịa dị n'oge gara aga, mgbe ahụ, enwere ike ịbụ na ọ bụ ozi ziri ezi ma na ịpị njikọ njikọ wepu aha agaghị eme ka ọ bụrụ nsogbu.
Ọ bụrụ na onye na-adịghị ekwurịta okwu na onye na-ezipụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ha na-akwado, ịpị njikọ nwere ike iweta nsogbu ndị ọzọ.